Abazali bakhala ngokufundiswa kwezingane ukuzimeteza | News24
Abazali bakhala ngokufundiswa kwezingane ukuzimeteza
Nevada - Abazali babafundi endaweni yaseNevada abathokozile ngesifundo esisha sokufundisa ngokuzimeteza.
Ngokusho kwephephandaba iLast Vegas Review Journal umabhalane webhodi lesikole usezwakalise ukushaqeka kwakhe ngezinto ezisetshenziselwa ukufunda ngezocansi ezikoleni.
Iphephandaba liphinde labika ukuthi udaba olunakwe kakhulu yibhodi olwezinto ezizosetshenziselwa ukufundisa izingane ezineminyaka engu-5 kuya ku-8 ubudala ngezocansi, okuyizinto ezimayelana nokubotozana kanye nokuzimeteza.
OLUNYE UDABA: Umfundisi ukhuthaza 'ukuzimeteza'
"Ufuna ukufundisa ingane yami ukuzimeteza?" kubuza omunye wabazali uJulie Butler.
UMnyango ubujwayele ukufundisa ngokuzithiba kwezocansi, kanye nangezindlela zokwenza ucansi oluphephile kulabo asebeqalile ukulenza, kubika iTimes Live.